ရွှေဘိုခရိုင်၌ မိုးစပါးများမရိတ် သိမ်းနိုင်သေး၍ ကချင်ပြည်နယ်သို့ ရွှေ့ပြောင်းလုပ်သား အဖြစ်? - Yangon Media Group
ရွှေဘိုခရိုင်၌ မိုးစပါးများမရိတ် သိမ်းနိုင်သေး၍ ကချင်ပြည်နယ်သို့ ရွှေ့ပြောင်းလုပ်သား အဖြစ်?
ရွှေဘို၊ အောက်တိုဘာ ၂၈- စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး၊ ရွှေဘိုခရိုင် ၌ မိုးစပါးဧက ငါးသိန်းကျော် စိုက်ပျိုးထားသော်လည်း နွေစပါးစိုက်ပျိုးခဲ့၍ မိုးစပါးကို စိုက်ပျိုးမှုနောက် ကျကာ စက်တင်ဘာလရောက်မှသာ စိုက်ပျိုးပြီးစီးသဖြင့် မိုးစပါးများမရိတ် သိမ်းနိုင်သေး၍ ကချင်ပြည်နယ်သို့ ရွှေ့ပြောင်းလုပ်သား (စပါးရိတ်)အဖြစ် သွားရောက်လုပ်ကိုင်နေကြ ကြောင်း ဒေသခံများထံမှ သိရသည်။
အဆိုပါဒေသရှိ မိုးစပါးစိုက် ခင်းများသည် သန္ဓေတည်ခြင်း၊ လုံးတန်ထွက်ခြင်း၊ ပန်းပွင့်ပြုစဖြစ် နေချိန်ရှိနေသေး၍ နောက်တစ်လ ကျော်အချိန်ရောက်ရှိမှသာ မိုးစ ပါးများ လှိုင်လှိုင်ရိတ်သိမ်းနိုင်မည် ဖြစ်သည်။ယင်းဒေသရှိ အခြေခံလူတန်း စားဖြစ်သော ကျပန်း (လက်လုပ် လက်စား)များသည် လယ်သမား များက စပါးရိတ်သိမ်းမှုကို စပါး ရိတ်သိမ်ြးွေခလှေ့ (Combime) စက်ကြီးများဖြင့် ရိတ်သိမ်းနေမှု ကြောင့်လည်းကောင်း၊ အလုပ်အ ကိုင်အခွင့်အလမ်းနည်းပါးနေမှု ကြောင့်လည်းကောင်း ကချင်ပြည် နယ်သို့ ရွှေ့ပြောင်းလုပ်သား (စပါး ရိတ်)အဖြစ် သွားရောက်လုပ်ကိုင် နေရကြောင်း သိရသည်။
“”ကျွန်မတို့ကတော့ ကချင် ပြည်နယ် မိုးညှင်းဒေသသို့ စပါး ရိတ်သွားတာဖြစ်ပါတယ်။ ဝင်ငွေ မရှိရင် ထမင်းစားဖို့မလွယ်ပါဘူး။ အခြေခံစားကုန်တွေ ဈေးကြီးမြင့် နေတယ်။ မိသားစုတစ်ခုမှာ ည၊ နံနက်စာ ငွေကျပ်ငါးထောင်ကျော် မှ ဝင်ငွေမရှိရင်မဖြစ်လို့ ယခုလို နယ်ခြား တိုင်းခြားသွားကာ အလုပ် လုပ်နေရပါတယ်””ဟု ခင်ဦးမြို့ နယ်၊ ကန်သစ်ရွာမှ စပါးရိတ်သွား သူတစ်ဦးက ပြောသည်။
ကချင်ပြည်နယ်သို့ ရွှေ့ပြောင်း လုပ်သားအဖြစ် သွားရောက်လုပ် ကိုင်ပါက လုပ်သားတစ်ဦးလျှင် တစ် ရက်စပါးရိတ်ခမှာ ငွေကျပ်ရှစ်ထောင် မှ ငွေကျပ်တစ်သောင်းခန့်ရရှိပြီး လယ်ပိုင်ရှင်မှ ထမင်းသုံးနပ်အခမဲ့ ကျွေးကြောင်း သိရသည်။
ထောင်ထွက်လူမိုက်များကို ငွေပေးစည်းရုံး အသုံးချနေမှုများအား ကာကွယ်သွားမည်ဟုဆို
အိန္ဒိယနိုင်ငံ၏ လွတ်လပ်ရေးနေ့အား ဂုဏ်ပြုသောအားဖြင့် မြန်မာ-အိန္ဒိယ တပ်မတော် ချစ်ကြည်ရေး အား?
အပူချိန်မြင့်တက်လာမှုနှင့် သောက်သုံးရေ ရှားပါးမှုကြုံတွေ့နေရသော ပြည်သူများကို ပရဟိတ ရေလှူအ?
မြောက်ကိုရီးယားက တောင်ကိုရီးယားနှင့် ဆွေးနွေးပြောဆိုမှု ရပ်ဆိုင်း
ရန်ကုန်-မန္တလေး အမြန်လမ်းပေါ် ခရီးသည်တင်ယာဉ် နောက်ဘီးပေါက်၍ လမ်းလယ်တန်းအား ဝင်တိုက်တိမ်းမှေ
ကိုယ်ဝန်ဆောင် ဇနီးသည်ကြောင့် အီတလီ၌သာ အိုင်ကာဒီ ဆက်ရှိလိုနေ
အိမ်ခြံမြေ အမွေကိစ္စနှင့် ပတ်သက်၍ ဦးအောင်ဆန်းဦး ပြည်ထောင်စု တရားသူကြီးချုပ်ထံ တိုက်ရိုက် အ??
လေပြင်း မုန်တိုင်း တိုက်ခတ်မှုကြောင့် ပွင့်ဖြူမြို့နယ် ဆင်လူးကျေးရွာ၌ လူနေအိမ် ၈၇ လုံး အမို?